Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. राेचक खबर – Page3– Janata Live
कसैले लुगै नलगाउने गाउँ !
विश्वमा कैयौं यस्ता शहर छन्, जहाँ आआफ्नै रितिरिवाज, परम्परा र चलनले ती स्थान चर्चित छन् । यस्तै स्थान मध्ये एक हो, सिक्रेट न्युडिष्ट भिलेज । बेलायतमा रहेको सिक्रेट भिलेजमा पत्याउन नसकिने रहनसहनको चलन छ । यस गाउँमा मानिसहरुमा कपडा नलाउने परम्परा रहेको छ । उनीहरु गरिब भएर वा कपडा नभएर नलगाएका होइनन् बर्षौदेखिको परम्पराको निरन्तरता अनुसार उनीहरु कपडा लगाउँदैनन् । यस सिक्रेट गाउँका मानिसमा मूलभूत सुविधाको कमी छैन । तर परम्परा र मान्यता अनुसार यहाँका मानिस बिना कपडा बस्ने गर्दछन् । कतिसम्म भने यहाँका बालक वृद्ध मात्र नभई वयस्क र महिला समेत नागों बस्दछन् । बेलायतको यो गाउँ पुरानो गाउँ...
विवाह भन्ने बित्तिकै यसले विवाहबन्धनमा बाधिने तयारीमा रहेका बेहुला बेहुलीमा उत्साह बढाउँछ । बेहुलाले घरबाट जन्ती लिएर बेहुलीको घरमा पुग्ने र त्यहाबाट विवाह गरी बेहुलीसहित बेहुलाको घर फर्कने परम्परा छ । तर कुनै बेहुला जन्ती लिएर घरबाट निस्कने बेलामा कोरोना संक्रमणको परिक्षणमा पोजेटिभ आए के हुन्छ होला ? भारतको उत्तर प्रदेशस्थित हमीरपुर जिल्लाको एक क्वारेन्टीन सेन्टरमा एक युवा कोरोना पोजेटिभ भेटीए । जो जोडतोडका साथ विवाहकालागि जन्ती लिएर बेहुला बनी घरबाट निस्किएका थिए । यतिकैमा उनको कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट आयो र उनी कोरोना पोजेटिभ देखिए । जसका कारण युवकलाई प्रहरीले रोक्यो र क्वारेन्टीन सेन्टरमा पठायो । हमीरपुरको सिसोलर थाना क्षेत्रको...
यी राशि भएका युवतीले पाउछन् बुद्धिमान र धनी पति, तपाईको राशि कुन ?
काठमाडौँ – राशिले मानव जीवनमा थुप्रै किसिमको प्रभाव पार्ने ज्योतिष शास्त्रमा उल्लेख छ। वैवाहिक सम्बन्धलाई सफल बनाउनको लागि राशी ग्रहहरु मिल्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले आज हामी कुन कुुन राशी भएका युवतीले धनि श्रीमान पाउँछन् भन्ने बारे बताउँन गइरहेका छौँ। मेष राशि यो राशी भएका युवतीहरु निकै भाग्यमानी रहेको बताइएके छ। उनीहरुलाई धेरै माया गर्ने श्रीमान मिल्नेछ। उनीहरुको पतिले श्रीमतीले भनेको कुराहरु सबै मान्ने बताइएको छ। कन्या राशी कन्या राशी हुने युवतीहरु निकै भाग्यशाली हुने छन्। उनीहरुलाई आफुले खोजेजस्तो पति मिल्ने देखिएको छ। आर्थिक रुपमा मात्र नभएर बौद्धिक रुपमा समेत राम्रो पति भेट्ने छन्। कन्या राशी भएका युवतीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध निकै...
गाडी चलाइरहेका बेला शारीरिक सम्बन्ध राख्दा भयानक दुर्घटना
काठमाडौं – अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सेन जोस सहरमा एक ट्रक ड्राइभरमाथि एक महिलाको हत्या र २ अन्यलाई गम्भीर घाइते बनाएको आरोप लागेको छ । यी ड्राइभरले चलिरहेको ट्रकमा शारीरिक सम्बन्ध राखेका थिए जसका कारण यो दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनाका क्रममा उनी अत्याधिक नशामा पनि छ । यो दुर्घटनामा ३५ वर्षकी एक महिलाको मृत्यु भयो र उनीसँग बसेका अन्य २ जना गम्भीर घाइते भए । ट्रकले सेन जोस नामको एक बारमा ठक्कर दिएको थियो त्यसपछि त्यहाँ भागाभाग भयो । पुलिसले आफ्नो रिपोर्टमा आरोपी ड्राइभर एलिक्स मोरिनोविरुद्ध हत्या र नशामा ट्रक चलाएको मुद्दा दर्ता गरेर उनलाई जेलमा हालिएको बताएको छ ।...
पुरुषको यौनांग खाइदिने संसारकै खतरनाक माछा
संसारमा कैयन् यस्ता विचित्र जीवहरु पाइन्छन् जसको आनीबानी निकै अनौठो हुन्छ । माछा प्रजाति पनि निकै विविधता तथा रहस्यले भरिएको प्रजाति हो । कतिपय माछाहरु विषाक्त हुन्छन् भने कतिपय माछा नरभक्षी पनि हुन्छन् । एउटा माछा त यस्तो छ जसले पुरुषको यौनांग खाइदिन्छ । एकजना मानिसको अण्डकोष खाइदिएको घटनापछि यो प्रजातिको माछालाई ‘टेस्टिकल इटिंग फिस’ अर्थात् अण्डकोष खाने माछाको नामले चिन्न थालिएको हो । यो यौनांगभक्षी माछाको नाम पाकु हो । यसलाई ‘नटक्रयाकर’ तथा ‘बल कटर फिस’ पनि भनिन्छ । यो माछा कुनै सार्क वा ह्वेलभन्दा कम भयानक छैन । यसका दाँत निकै शक्तिशाली तथा खतरनाक हुन्छन् । यो माछाको...
‘मैले दुईवटा ब्वाइफ्रेन्डलाई धोका दिइसके, अब म के गरौँ ?
घर चितवन भए पनि म काठमाडौँमा हुर्केको मान्छे। पढाइमा एभरेज नै छु। स्कुलको बेला एउटा केटा धेरै मन पथ्र्यो र म अहिले ऊसँग रिलेसनमा पनि छु। मलाई ऊ एकदमै राम्रो लाग्छ। म मेरो जीवन ऊसँगै बिताउन चाहन्छु तर मेरो बानी–व्यवहार एकदम खत्तम छ। ऊ अहिले अमेरिकामा पढ्दैछ। ऊ पढ्नमा पनि राम्रो छ। उसको परिवार पनि एकदम बुझ्ने किसिमको नै पाएँ। उसको परिवार देख्दा मलाई धन पनि भएको र मन पनि भएको भन्न मन लाग्छ। त्यस्तो केटा मैले अरु पाउँदिन भन्ने मलाई थाहा छ। हामीबीच ‘सबै’ कुरा भैसक्यो। ऊ विदेश गएपछि मैले यता बिटिटिएम पढेँ। म पढ्ने कलेजमा अरु फ्याकल्टी पनि...
म ३३ वर्षकी सिगंल केटि हुँ, मलाई फोनमा बोल्ने, शारीरिक सुख दिनसक्ने केटा साथी चाहियो
दुई छोराकी आमा भर्खर जुँगाको रेखी बसेको तन्नेरीसँग चक्कर चलाउँछिन्। कुनै ४० वर्षकी महिला २० वर्षको युवासँग रोमान्स गर्छिन्। यस्तो सम्बन्धको नियत के हुन्छ ? अर्थात्त्र हो तरु श्रीमान् विदेशमा हुने, श्रीमान्को माया नपाउने, असन्तुष्ट र कुण्ठित महिलाहरूले यस्तो सम्बन्ध राखेको पाइएको छ। उता तन्नेरीहरूका आफ्नै कथा छन्। उनीहरू ‘आन्टी’हरूसँग फस्नुका कारण अनेक छन्। कसैका लागि यो एकप्रकारको रोजगारी हो, कसैका लागि आर्थिक संकट हल गर्ने उपाय। अनि, कसैका लागि परिपक्व महिलासँग देहयात्राको आनन्द।यस्तो सम्बन्ध राख्ने प्रवृत्ति किन बढ्दै छ समाजमारु अनि यसका जटिलता के–के हुन्रु अम्मर जिसीले केलाउन खोजेका छन्। केस नं १ काठमाडौँका २३ वर्षीया जनम परिवारले बिहेको...
कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा राशिले ठुलाे महत्व लिएकाे हुन्छ । अहिले यस युगमा मानिसहरुले ज्योतिषशास्त्रमा आस्था राख्छन् । ज्योतिषशास्त्रले भविष्यवाणी मात्र हैन व्यवहारका बारेमा पनि जानकारी दिने गर्छ ज्योतिषशास्त्रले मानिसको कयौँ रहस्य खोलिदिने गर्छ । यस विद्या मार्फत हामीले मानिसको गुण, दोष र यसको व्यक्तित्वका बारेमा पत्ता लगाउन सक्छछाै । आज हामी तपाईलाई केही राशिका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जो निकै रिसाह हुने गर्छनु। अझ भनौँ उनीहरुको रिस नाककै टुप्पोमा हुने गर्छ । जानौँ कुन कुन हुन् ती राशि : मिथुन राशि: मिथुन राशिका व्यक्तिको रिस पनि नाकको टुप्पामै हुने गर्छ । यिनीहरुलाई छिट्टै रिस उठ्ने र धेरैबेरसम्म रहने हुन्छ।...
हाम्रो आसपास केहि यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्, जसले आफ्नो जीवनको मुस्किल भन्दा मुस्किल परिस्थिति पनि हल गर्छन् । यिनीहरुलाई देखेर मनमा यो कुरा आउन सक्छ कि यिनीहरुमा त्यस्तो के गुण छ त ? ज्योतिषशास्त्रका अनुसार केहि राशिका व्यक्तिहरु हुन्छन् जसको भाग्य निकै बलियो हुन्छ | यतिमात्र होइन यिनीहरुको भाग्यको असर उनीहरुको जीवनसाथीमा पनि पर्छ । वृष राशि शुक्र ग्र’ह यस राशिको स्वामी हो, जसका कारण अरु राशिका व्यक्तिहरु यस राशिका व्यक्तिसँग सजिलै आकर्षित हुन्छन्। यो मानिन्छ कि यस राशि का मानिस निकै भाग्यमानी हुन्छन्। यो विश्वास छ कि यो राशिका मानिसहरुलाई सम्मान र धनको कहिल्यै अभाव हुँदैन। कर्कट राशि चन्द्रमा...